Izindlu zeAnemones (2)
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguΜαριλένα
Α izakhiwo ezi-3 ezihlaziyiweyo, ezakhiwe ngamatye, ezimi ngaphandle kwedolophu yaseSitia kufutshane neSitia sandy beach. Ijikelezwe ngamathafa kunye neegadi. Ikhuselekile kubantwana. Ifakwe ngokupheleleyo ngendawo yokupaka yabucala ngaphakathi kwipropathi.
Eli gumbi lipholileyo lisebenza kakhulu kwaye lifakwe ngokupheleleyo. Ibekwe kwindawo engaphandle kwedolophu yaseSitia, imizuzu nje embalwa uqhuba ukuya emarikeni, iicafe / iibhari kunye nonxweme lwaseSitia.
Indawo enkulu ibandakanya indawo yokulala enebhedi ephindwe kabini kunye nekhabhathi, ikhitshi eliphangaleleyo elixhotyiswe ngokupheleleyo (ifriji encinci, i-oveni yetoaster, umenzi wekofu njl.njl) kunye nendawo yokutyela ye-4. Indawo yegumbi lokuhlala, enesofa / Ibhedi kunye nomabonakude, ujonge kwithambeka elingaphambili kunye negadi entle enkulu. Igumbi lokuhlambela eligcweleyo libonelela ngeshawa. Ilungele ukuphumla kunye nolonwabo lwentsapho kunye neeholide zezihlobo.
Kumgangatho ongaphambili kukho isidlo sangokuhlwa / itafile yesidlo sasemini ukuba ufuna ukonwabela ukutya kwakho ngaphandle.
Esi sakhiwo singqongwe yimithi emidala, iziqhamo nemifuno yemifuno; ibiyelwe kwaye ikhuselekile kubantwana.
Indawo yokupaka yasimahla kwizakhiwo
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (i-vitro-ceramic hotplates, ifriji, i-oveni, izixhobo zasekhitshini)
Intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina
Imigca eyongezelelweyo yasimahla kunye neetawuli
Indawo yebarbeque ekwabelwana ngayo
Umbuki zindwendwe ngu- Μαριλένα
Inombolo yomthetho: 00000000000